Semalt: किन तपाईंलाई एक सफल SEO अभियानको लागि ब्याकलिlin्कको आवश्यकता छ
इन्टरनेटले ई-वाणिज्य प्रयासहरू गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि ठूलो स्रोत प्रस्तुत गर्दछ। ठूला कम्पनीहरूले डिजिटल मार्केटिंग सीपको प्रयोगबाट फाइदा लिन्छन्। सामग्री मार्केटिंग जस्ता केही रणनीतिहरूको माध्यमबाट, यो सम्भव छ कि लाखौं ग्राहकहरूको अनलाइनमा जान सक्ने जो तपाईंको उत्पादन किन्न सक्छन्। यी विधिहरू मध्ये केहि सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सीप साथै एसईओ जस्ता अरूहरू समावेश गर्न सक्दछ। खोज इञ्जिन अनुकूलन खोज ईन्जिन एनालिटिक्स उपकरण प्रयोग गर्दछ। SEO मार्फत, लाखौं आगन्तुकहरू ल्याउन सम्भव छ जसले वेबमा विशेष कुञ्जी सर्तहरू खोज्छन्।
SEO विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर काम गर्दछ। एउटा प्रभावी एसईओ विधि सफल ब्याकलिinking्कको माध्यमबाट हो। प्रत्येक अनलाइन व्यवसायलाई आफ्नो एसईओ अभियानहरूको लागि केही प्रकारको ब्याकलिks्कहरू आवश्यक पर्दछ। एक नौसिखियाले ब्याकलिंक्सको विभिन्न रूपहरू बीचको भिन्नतामा आश्चर्यचकित हुन सक्छ। ब्याकलिks्कहरू तपाईंको ईन्टरनेट मार्केटिंग अभियानको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ।
अधिकतम बेल, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, यहाँ केहि मानक ब्याकलि methods्क विधिहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ।
१. संसाधन पृष्ठहरूबाट ब्याकलिks्कहरू प्रयोग गर्नुहोस्
त्यहाँ एक विशेष उत्पादको लागि हरेक कोनाकामा संसाधन पृष्ठहरू छन्। ब्याकलिks्कहरू हाम्रो एसईओ प्रयासहरूलाई मद्दत गर्न, तिनीहरू लक्षित पृष्ठ वा डोमेनमा लिंक जुस स्थानान्तरण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। हरेक वेबसाइट यसको प्रासंगिक र प्रामाणिक हुँदैन। प्रत्येक साइट हैन कि लक्षित ग्राहकहरु लाई लिंक को रस स्थानान्तरण मा एक संसाधन हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त, फिल्टर गरिएको स्रोतबाट आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नाले उनीहरूको उत्पादनहरूको लागि सम्भावित खरीदारहरूलाई असर गर्न सक्ने एक पहुँच बनाउने सम्भावना बढ्छ।
२. ब्याकलिks्कहरू इन्फोग्राफिक्सको साथ आर्जित
सामग्रीहरू भाइरल हुने एउटा तरिका साझेदारी गरेर हो। एसईओ व्यापक साझा मा निर्भर गर्दछ जुन सामाजिक मिडियामा सम्भव छ। इन्फोग्राफिक्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अर्थको सामग्री साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। उदाहरण को लागी, सामाजिक मिडिया मा इन्फोग्राफिक्स को उपयोग को एक विशाल अनुसरण गर्न सक्छन्। नतिजाको रूपमा, सम्पूर्ण वेबसाइटले विश्वभर मा ग्राहकहरूको असंख्य आगन्तुकहरू पाउन सक्दछन् जुन तपाईंको साइटबाट तपाईंको लिंक क्लिक गर्दछ। फरक डोमेनबाट सुरु हुने ब्याकलिks्कहरूले अख्तियार बोक्न सक्छ जुन वेबसाइट रैंक उच्च बनाउन सक्छ।
Non. गैर नाफामुखी वेबसाइटहरूबाट ब्याकलिंक्स
केहि गैर-नाफामुखी साइटहरूले उनीहरूको प्रयोगकर्तालाई लिंक प्रदान गरेर लाभदायक बनाउँदछन् जसले डोनेट बटन प्रयोग गर्दछन्। उदाहरण को लागी तपाइँ तपाइँको को लागी मा एक गैर नाफा को संगठन को लागि दान गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईंलाई लिंकज वा अतिथि पोष्ट पठाउन सक्छन् जुन बदलेमा तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको मार्केटिंग सीपलाई फाइदा पुग्न सक्छ। धेरै साइटहरूले लिंकहरूको लागि दानको प्रस्ताव स्वीकार गर्दछन्। तिनीहरूको परिप्रेक्षमा, तपाईंलाई दिन, एक ब्याकलिink्क नि: शुल्क हो, त्यसैले तिनीहरू हुन् जसले तपाईंको वेबसाइट ट्राफिकबाट फाइदा लिइरहेका छन्। तपाईको ब्याकलिंक्सको स्रोत बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुहोस्।
खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन एक मानक डिजिटल मार्केटिंग विधि हो जसले कम्पनीले उनीहरूको बिक्री छिटो बढाउन सक्दछ एसईओ खोज ईन्जिनमा वेबसाइटको उपस्थिति बढाउन खोज्दछ, ब्रान्ड सचेतना बढाउँदै अन्तमा लिंक गर्ने प्रक्रिया सुधार गर्दछ। एक नयाँ उद्यमी ब्याकलिinking्कको बिभिन्न प्रकारहरू र उनीहरू कसरी वेबसाइट र एसईओ प्रदर्शनमा असर गर्छ भनेर जान्न चिन्तित हुन सक्छन्। यस लेखमा केहि प्रासंगिक लिंकहरू छन्।
तपाईं आफ्नो साइटमा आधिकारिक ब्याकलिंक्स सेट अप गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण प्रक्रिया सफल बनाउँदै।